Microwave buds nekaroti | Kicheni Mapepa
Maria vazquez | 29/05/2021 10:00 | Cold Kutanga
Unoyeuka here iyo microwave karoti Chii chatakakudzidzisa kugadzirira nguva pfupi yadarika? Nhasi tichazoishandisa zvakare kugadzirira a nyeredzi yakajeka uye inozorodza: Microwave buds ine karoti. Chikafu chakareruka chatichazopa edu ekare karoti kumonyoroka.
Masaradhi anova anotangisa akakwana panguva ino yegore. Kana kupisa kuchirova, hapana chinhu senge kutsva kwemamwe mabhureki uye mamwe mashizha egirini akabatanidzwa nemamwe. michero nemiriwo kutanga chikafu. Mune ino kesi, iyo runyorwa rwezvigadzirwa zvaisagona kuve nyore: mapundu, makarotsi, matomatisi, chives uye mazambiringa akaomeswa.
Inotora maminetsi masere chete ichatora gadzirira karoti mu microwave. Maminitsi aunogona kutora mukana, sezvandakaita, kugadzirira zvasara zvezvipenga uye kupfeka. Sarudza iyo yaunonyanya kufarira; Ini ndangoisa munyu, mhiripiri, uye imwe mhandara yemafuta emuorivhi. Unoshinga kuzvigadzirira here?
Aya ma microwaved karoti bhudzi akakwana sekutanga, akareruka uye anozorodza kurwisa mazuva anopisa.
2 makarotsi makuru
XNUMX tomate maduro
1 knob yemafuta
Isu tinosvuura iwo makarotsi uye toacheka pakati, ese akareba uye akapamhama. Gare gare tinokamura tsvimbo imwe nepakati kureba saka ivo vanotora nguva shoma yekubika.
Los colocamos en un plato hondo o tupper y tinowedzera mvura zvekuti inovhara hwese hwese hweplate kana tupper. Mune yangu, chigunwe chemvura. Mushure mezvo, tinomesa makarotsi uye tofukidza chigadziko nekuputira kwepurasitiki kuti tiendese kune microwave.
Isu tinobika pasimba remagetsi kwemaminetsi mashanu kusvika matanhatu kana kusvika makarotsi ari nyoro.
Kunyange isu tichitora mukana we vhura iyo bhu nepakati, nyanya nyanya uye uteme chives. Isu tinosanganisa maviri ekupedzisira uye toisa musanganiswa pamabhureki kana chero kwaunoda.
Kamwe iyo karoti inonamira zvinyoro, tinoifumura, toisa bhotoro pavari uye tobika kweminiti nebasa re grill.
Tinowedzera kune saladhi tanto los bastoncitos de zanahoria como las pasas.
Kupedzisa isu munyu uye mhiripiri uye mvura nemafuta emuorivhi los cogollos con zanahorias al microondas.
Ruta completa hacia el artículo: kudzidziswa » Shamwari » Cold Kutanga » Microwaved karoti bhudhi
Yakabikwa tuna yakarongedzwa aubergines